'वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं' - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं’
Posted by Headline Nepal | २५ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १४:१५ |
प्रदेश नं २ को सरकारले हिजो बिहीबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जाबाट ५० मेघावट विजुली उत्पादन गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । जनकपुर चुरोट कारखाना हाताभित्र रहेको प्रदेशको कार्यालय र निवासमा सौर्यऊर्जा जडान गर्न नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउन यो नीति तथा कार्यक्रमले कसरी सहयोग गर्छ ? अथवा यो नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्रदेश २ ले अर्को केही रणनीति बनाएको छ ? प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी पार्टीको गठबन्धन सरकार छ । सरकारलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समर्थन गरेको छ । गठबन्धन सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको जनताले के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने सन्दर्भमा रहेर राज ढुंगानाले प्रदेश २ का अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवसँग गरेको कुराकानी :
तपाईंहरुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको गुँदी कुरा के हो ?
– संसदमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रो सय दिने कार्यक्रमलाई जोड्दै हामीले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि प्राथमिकतामा छन् । मुख्य भनेको कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो । मानव सूचांक हेर्ने हो भने प्रदेश २ मा शिक्षाको अवस्था खस्केको छ । राजनीतिक संक्रमण हामीले पार गरेर अहिले यो अवस्थामा हामी छौं । पहिला राज्यले निगरानी गर्न सकेन, राजनीतिक एजेन्डा समावेश गर्न पाएन, ती कुरालाई हामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौं ।
ऊर्जाको कुनै योजना छैन ?
– ८२ हजार मेगावट क्षमता भएको देश हो हाम्रो । अहिलेसम्म हामीले ९ सय ५० मेगावट उत्पादन गर्दैछौं । प्रदेश २ मा हाइड्रो इलोक्ट्रोसिटीको सम्भावना न्यून छ । त्यसैले हामीले वैकल्पिक ऊर्जालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
कृषिमा धेरै बोर्ड गठनको कुरा गर्नुभएको छ नि ?
– यो गठन भनेको प्रकृयागत अघि बढ्ने हो । हामी गठन गछौं, यो केन्द्रमा पनि छ । विकास बोर्ड हाम्रो केन्द्रीय नीतिमा छ । सम्भवतः काम पनि गरिरहेको छ । प्रदेश नं २ मा कृषि विकास बोर्ड, दुग्ध विकास बोर्ड, मत्यस विकास बोर्ड गठन हुँदै जान्छ । यो आवश्यकता पनि हो । यहाँ सय प्रतिशत कृषिमा आधारित छ । किसानलाई प्राथमिकता दिनेक्रममा हामीले बोर्ड गठनको नीति लिएका हौं ।
Previousनेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा संयुक्त सैन्य अभ्यासले नयाँ आयाम थप्दै
Nextसार्कीको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीको माग
जघन्य र ठूला अपराध नियन्त्रणको नयाँ आईडिया
९ श्रावण २०७५, बुधबार १२:१५
परिवार कल्याणको निर्देशकमा डा. बिच्छा
६ श्रावण २०७५, आईतवार १६:३१
२४ पुष २०७४, सोमबार १४:४३